इसीमान सम्वाददाता बीरगंज १५ बैशाख २०७८ 77 पटक पढिएको
अस्पतालको आइसियू वार्डमा उपचाररत बारा र सर्लाहीका दुई जना सङ्क्रमितको १५ गते बुधबार मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
मृत्यु हुनेमा बारा जिल्लाको सुर्वण नगरपालिका वडा नम्बर ७ निवासी ३० वर्षीय महिला रहेकी छन् ।
बैशाख १३ गते स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि उनलाई नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । भर्ना हुँदा कोभिडसँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि पिसिआर प्रविधिबाट उनको परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो ।
कोरोना पुष्टि भए पश्चात उनलाई अस्पतालको कोभिड अईसियूमा अक्सिजन सपोर्टमा राखेर उपचार गर्दैगर्दा मृत्यु भएको अस्पतालका कोभिड संयोजक डा।राजरोशन दासले बताउनुभयो । उनमा गम्भीर किसिमको निमोनिया देखिएको थियो । निमोनियाका कारण श्वासप्रश्वासमा भएको समस्याका कारण उनको मृत्यु भएको डा. दासले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी सर्लाही जिल्लाको धनगढा नगरपालिका वडा नम्बर ४ निवासी ४३ वर्षीय पुरुषको पनि बुधबार नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ ।
उनीहरु दुबैको बुधवार बिहान श्वासप्रश्वासमा समस्या भएपछि मृत्यु भएको डा. दासले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मंगलबार अस्पताल भर्ना भएका उनको एन्टीजेन परिक्षणमा कोरोना देखिएको थियो । पिसिआरका लागि स्वाब जम्मा गरीए पनि रिपोर्ट नआउँदै उनको मृत्यु भएको डा. दासले बताउनु भयो ।